လက်သည်းတွေဘာကြောင့် ခဏခဏကျိုးနေရတာလဲ..? ကာကွယ်နည်း by popolay.com
05 Feb 2020 1,206 Views
ပျိုမေတို့အတွက်တော့ အလှအပနဲ့ ပက်သက်ရင် လက်သည်း ခြေသည်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ လက်သည်းလေး ရှည်လာလို့ လှလှပပ ပြင်ဆင်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး လက်သည်းကျိုးတာ၊ လက်သည်းတွေ ကွဲကုန်တာတွေကြောင့် စိတ်ပျက်နေရပါသလား..?
ဒါဆိုရင်တော့ အခုဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက် ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က သတိမထားမိလိုက်တဲ့ ဖော်ပြပါ အခြေခံအချက် (၇)ချက်ကြောင့် သင့်ရဲ့လက်သည်းတွေ ကျိုးတာ၊ ကွဲတာ ဖြစ်စေတယ်လို့ အလှပရေးရားကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေက အကြံပေးထားပါတယ်။
လက်သည်းကျိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက လည်းသည်တွေ ကြွပ်ဆတ်နေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်သည်းတွေ အခုလိုဖြစ်ရတာဟာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ လက်သည်းဖျက်ဆေး အမှတ်တံဆိပ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းဖျက်ဆေးတွေကို ဈေးပေါတာတွေ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လက်သည်းဖျက်ဆေး သုံးတဲ့အခါ အတင်းအားစိုက်ပြီး လက်သည်းတွေကို ပွတ်တာမျိုး မလုပ်သင့်သလို လက်သည်းပေါ်မှာ လက်သည်းဖျက်ဆေးတွေ ခြောက်ပြီး ကျန်ခဲ့တာမျိုးက လက်သည်းရဲ့ စိုထိုင်းဆကို လျော့ပါးစေတဲ့အတွက် လက်သည်းတွေ အားနားတာ၊ ကြွပ်ဆတ်တာတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
လက်သည်းဖျက်ဆေးကို စိတ်ချရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေ သုံးသင့်ပြီး အလွန်မကျွံမသုံးမိအောင် သတိထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဟာရမပြည့်ဝရင်လည်း လက်သည်းတွေကို ထိခိုက်နိုင်စေပါတယ်။
လက်သည်းတွေ ကြံခိုင်မှု မရှိတာဟာ သံဓာတ်အားနည်းတာ ဒါမှမဟုတ် သွေးအားနည်းတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သံဓာတ်ဟာ သွေးနီဥလေးတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ လက်သည်းတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သံဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနွယ်၊ ပဲလုံးဖြူတွေနဲ့ အနက်ရောင် ချော့ကလက်တို့ကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
အရည်ဓာတ်ခမ်းခြောက်မယ်ဆိုရင် အရေပြားနဲ့ လက်သည်းတွေ ခြောက်သွေ့လာမှာ မဆန်းပါဘူး။ ရေသောက်တာ လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ လက်သည်းတွေပါ အဲဒီဒဏ်ကို ခံရလိမ့်မယ်လို့ အရေပြားကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
လည်းသည်းတွေ ကြွပ်ဆတ်တာဟာ အရည်ဓာတ်ခမ်းခြောက်တာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတာမို့ တစ်နေ့လျှင် ရေဖန်ခွက် ၉ ခွက်လောက် သောက်သင့်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ခြေထောက်၊ လက်ထောက်တွေ အမြဲတမ်း စိုစွတ်နေအောင် Moisturizer (အလှဆီ)ခရင်မ်ကို နေ့စဉ်လူးပေးသင့်ပါတယ်။ လက်သည်းတွေဟာ အတွင်းပိုင်းကပဲ အစိုဓာတ်လိုတာမဟုတ်ပဲ အပြင်ဘက်ပိုင်းကလည်း အစိုဓာတ်ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာမကြာ Moisturizer လိမ်းပေးခြင်းက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းဖို့အတွက် လက်တွေကို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ချောင်းတွေကို ရေထဲမှာ နူးနေအောင် အကြားကြီး စိမ်ထားတာမျိုး၊ လက်တွေ ပဲကြီးခွံလိုက်အောင် ရေကိုင်တာမျိုး၊ အဝတ်လျှော်တာမျိုး တွေတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဆပ်ပြာမှဒန့်။ ဆပ်ပြာရည်တွေမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ကပ်ညိပြီး လက်သည်းတွေ ခြောက်သွေ့ကာ ကွဲအက်ပျက်ဆီးလွယ်စေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အချိန်အကြာကြီး ရေနဲ့ထိတွေရမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက လက်အိပ်ဝတ်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ကျိုးသွားတဲ့ လက်သည်းနေရာမှာ လက်သည်းအစားထိုးပြီး အလှပြင်တာက လက်သည်းရဲ့ အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ လက်သည်တွေအလှပြင်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဂျယ်လီတွေက လက်သည်းရဲ့ အောက်ခြေလွှာနဲ့ ပန်းကုံးတွေကို ပျက်ဆီးနိုင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လက်သည်း အလှပြပြင်ရေးလုပ်တဲ့ တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြားမှာ လအနည်းငယ်ခြားသင့်ပါတယ်။
လက်သည်းတွေ ဖြူစင်တောက်ပလာဖို့အတွက် အရောင်တင်တဲ့အခါမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆေးနဲ့တင်တာ ဒါမှမဟုတ် သမားရိုးကျအတိုင်း ခြစ်ထုတ်တာ စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ပဲ အရောင်တင်တင် လည်းသည်းရဲ့ အပေါ်ယံလွှာတွေ အနည်းနဲ့အများ ကွာထွက်သွားစေပါတယ်။ အခုလို လုပ်ခြင်းဟာ လက်သည်းတွေကို ပိုမိုပါးလွှာသွားစေပါတယ်။
ဖော်ပြပါအချက် (၇)ချက်ကတော့ လက်သည်းတွေ ကျိုးလွယ် ပျက်ဆီးလွယ်ဖြစ်ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက်ပျက်ဆီးနေမည်ဆိုပါက ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များနဲ့ တိုင်ပင်ကုသရန် အကြံပေးလိုက်ရပါသည်။